Ezona ndlela zimfutshane zisetyenziswayo zeFotoshop yeWindows | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ezona ndlela zimfutshane zisetyenziswayo zeFotoshop yeWindows
UFran Marin | | Photoshop, Amaqhinga
Xa sichitha iiyure ezininzi sisebenza ekusetyenzisweni koyilo lwegraphic kwaye ngakumbi xa sibandakanyeka kwiiprojekthi ezinzima kakhulu ezifuna ukutshintshwa rhoqo kwezixhobo ezahlukeneyo, kuluncedo kakhulu ukwazi iindlela ezimfutshane (Unokukufumana oku Ukuqokelelwa kweendlela ezimfutshane zabayili). Enkosi kubo, siya konga ixesha elininzi kwaye umsebenzi wethu uya kuba kakhulu ngakumbi zikhawuleza kwaye zivelise.
Apha sabelana nawe ngeyona miyalelo isebenzayo yePhotohop:
Izixhobo: Kuya kufuneka uyazi ukuba uninzi lwezixhobo zinxulunyaniswa nokubhalwa kwegama labo ngesiNgesi, usazi oku ngokuqinisekileyo ukuba kulula ngakumbi ukuba ukhumbule:
Isixhobo sokuhambisa: V
Isixande Marquee Isixhobo:M
I-lasso yePolygonal: L
Umlingo wand: W
Isixhobo sesityalo: C
Indawo yokulahla: I
Indawo yokulungisa ibrashi: J
Ibhrashi: B (Ukutshintsha ubungakanani bebrashi yethu, cinezela nje Ctrl + cofa kwiqhosha lasekunene lempuku kwaye ulilayishe ngasekhohlo okanye ngasekunene). Kananjalo ngesitshixo se «,"Okanye".»Singaguqula ubungakanani kunye nohlobo lwebrashi. Sinokungenelela ekuthambekeni kwebrashi yethu (Shift + D ukuyinciphisa ngama-25% kunye Shift + [ ukuyonyusa nayo ngama-25%). Ukutshintsha ukukhanya kwebrashi yethu, konke ekufuneka sikwenzile kukucofa amaqhosha amanani (ukusuka ku-1 ukuya ku-0) kunye nokusebenza kokuhamba kwakho Shift + inani lamaqhosha ukusuka ku-1 ukuya ku-0).
Isikhuseli seConer: S
Imbali yebrashi: Y
Ipeyinti yokupeyinta: G
Umbhalo othe tye: T
Ukukhethwa kwendlela: A
Amaqela ezixhobo: Kukwakho namaqela ezixhobo, umzekelo isakhelo esiyi-rectangular esidibanisa amathuba ahlukeneyo. Sizikhetha njani izixhobo ezahlukileyo ezikwiqela ngokukhawuleza? Inkqubo ilula kakhulu. Ukwenza oku kufuneka sikhethe isitshixo Shift + ileta enxulunyaniswa neqela lezixhobo. Ngexesha ngalinye sicinezela iqhosha lokushiya siza kukhetha isixhobo esahlukileyo. Kwi-Photoshop sinamaqela ali-17 ezixhobo kwaye zonke ziyafumaneka ngendlela efanayo.
Imibala: Ukutshintshisa umbala ongaphambili ngasemva nangokuphendulayo, kuya kufuneka ucofe isitshixo kuphela X kunye nokubuyisela imibala emiselweyo (umbala ongaphambili omnyama kunye nombala omhlophe ongasemva) cofa iqhosha D.
Imenyu: Ngokwenyani, uninzi lweendlela ezimfutshane kwezi amamenyu zinokungasebenzi kuba enyanisweni uninzi lwezinto abazikhethayo azisetyenziswa rhoqo, ke ndincoma ukuba ufunde ezo uzisebenzisa rhoqo.
Uvimba: Ngokwam, ndisebenzisa lo myalelo ngamanye amaxesha Ctrl + N (ukwenza ifayile entsha), Ctrl + O (ukuvula ifayile), Ctrl + W (ukuvala ifestile), I-Ctrl + S (indlela elungileyo yokugcina uxwebhu ngendlela ebukhali, inokusisindisa nakweyiphi na into engalindelekanga) kwaye Ctrl + P (Ukuprinta ifayile yethu).
Ushicilelo: Xa sisenza nawuphi na umsebenzi kwi-Photoshop kuqhelekile ukuba senza iimpazamo yiyo loo nto kubaluleke kakhulu ukuba sazi indlela emfutshane enqamlezayo. (Ctrl + Z), Yenza kwakhona (Shift + Ctrl + Z) ubuye umva (Alt + Ctrl + Z). Kwakhona zakudala zeCortar (Ctrl + X), Khuphela (Ctrl + C) kunye Cola (Ctrl + V). Umyalelo wokugcwalisa unokuba luncedo (Shift + F5) apho sinokuthinta khona umaleko / umaleko wobuso ngokuzenzekelayo, kunye nesixhobo esiguqukayo (Ctrl + T [+ Shift yokuguqula ngendlela eyiyo]).
Umfanekiso: Ukusuka kule menyu kunokuba ngumdla kwiindlela ezimfutshane zokusebenzisa iTone ezenzekelayo (Shift + Ctrl + L)Umahluko ozenzekelayo (Alt + Shift + Ctrl + L) y Umbala oZenzekelayo (Shift + Ctrl + B).
Cap: Ngokukodwa xa sigqiba ukuqamba kwethu sihlala sidibanisa iileya zethu, sinokufikelela kolu khetho ngokucinezela ICtrl + E. Kananjalo zibeke kwiqela Ctrl + G kwaye ungazihlanganisi kunye Shift + Ctrl + G.
Ukhetho: Sinokukhetha yonke indawo yethu ngokucinezela Ctrl + A, Ungakhethi kwi Ctrl + D kwaye sityale ukhetho lwethu kwi Ctrl + Mna.
IVista: Ukunyusa ukusondeza kwethu siza kusebenzisa ctrl++ kunye nokunciphisa Ctrl + -.
Sishiye naliphi na kwiqula leinki? Ngaba ucebisa naziphi na ezinye iingcebiso okanye iindlela ezimfutshane zeFotohop kwiWindows? Olu luhlu luxhomekeke ekubeni ayingobonke abasebenza ngeenkqubo ezifanayo, ukuba ucinga nawuphi na omnye umthetho obalulekileyo Sixelele ngokusebenzisa uluvo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Ezona ndlela zimfutshane zisetyenziswayo zeFotoshop yeWindows
Iibrashi zeAdobe Photoshop: Iipakethe ezi-2 zaSimahla
Iziphumo zewebhusayithi ze6